Shina lakaoly ambany gorodona vita amin'ny vita vita vita vita vita amin'ny visy | Karlter
lakaoly ambany gorodona vinyl
Entana: Vinyl Plank andiany maina maina，lakaoly ambany rano anti-slip PVC plank gorodona
1.Ny fitaovana voajanahary dia sariaka amin'ny tontolo iainana 100%.
2. Anti-slip, Anti-agila, avo lenta anti-abrasion ary anti-bakteria.
3. Mafana sy mahazo aina.
4.Mora ny manadio.
5.100% Tsy tantera-drano sy mando-porofo.
7.Sitrana fanamafisam-peo sy fihenan'ny tabataba.
8. High-Elasticity, fiarovana avo.
9.Mora ny mametraka.
10.Ny vidin'ny fikojakojana ambany, tsy mila savoka.
11.Loko samihafa atolotra mba hifanaraka amin'ny toe-javatra samihafa.
12. androm-piainana lava kokoa
Anarana Fitaovana visy (gorodona maina maina LVT)
Loko loko mahazatra na toy ny santionanao
Ny hatevin'ny birao 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 5.0mm na namboarina
Manaova hatevin'ny sosona 0.07mm, 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm toy ny mahazatra
Surface Design Veneer (Hard / Softwood) voamaina, marbra, vato, karipetra.
Surface texture Embona ambongadiny, voasarimakirana maivana, Kristaly, tànana misy tànana.
farany UV (Mat, Semi-Matt, Mamirapiratra)
Fe-potoana 1 volana
lafiny santimetatra MG
(Na namboarina) 6 "* 36" 152 * 914.4
Inona no atao hoe lakaoly LVT?
Ny lakaoly ambany tile vita amin'ny vinina dia mirary endrika kely kokoa. Mila aforeto mandritra ny fametrahana azy io mba hanomezana gorodona maharitra sy maharitra kokoa. Ianao dia mila miantoka ny gorodona napetrakao eo amboniny, fisaka sy mahitsy. Raha misy tsy fahalavorariana ao amin'ny gorodona ambanin'ny tany dia hiseho eo amin'ny gorodonao LVT vaovao izy io. Toy izany koa ianao, mila miantoka ny fanambanin'ny lalamby alohan'ny hametahana ny taila.
Satria mila miraikitra ny taila tsirairay, dia mety maharitra ela kokoa ny fametrahana an'ity karazana vinyl mihaja ity. Mety ho sarotra kokoa ihany koa ny manao izany amin'ny tenanao, miaraka amin'ireo tompon-trano maro misafidy ny hanakarama matihanina hifanaraka aminy.
Ny tombony lehibe azo avy amin'ny lakaoly midina LVT dia misy
• Mora kokoa noho ny tsindry mampifandray LVT
• Fitomboan'ny fitoniana
• Tsy dia hisy fiatraikany amin'ny fiovan'ny hamando sy ny mari-pana
• Maharitra kokoa any amin'ireo faritra be fivezivezena
Na dia tsy misy fiatraikany amin'ny gorodona sy ny mari-pana toy ny gorodona vita amin'ny hazo aza ny gorodona LVT, mbola mety hiteraka olana kely amin'ny tany ihany io. Ka raha mikasa ny hametraka amin'ny faritra mando be ianao, ny lakaoly amin'ny ankapobeny no safidy tsara kokoa.
Teo aloha: EIR SPC gorodona vita amin'ny vinina
Manaraka: gorodona vita amin'ny vinina malalaka
5.0mm SPC gorodona vinina
Fitaovana laminate 8.0mm
12.0mm laminate gorodona
5.5mm SPC visy gorodika
EIR SPC gorodona vita amin'ny vinina
2.0mm lakaoly midina